Nail Strips လက်ကား၊ လက်ကား လက်သည်းဆိုးဆေး အမြှောင်းများ လက်လီလက်ကား လက်သည်းဆိုးဆေး အစင်းကြောင်းများအတွက် တွေ့ရှိသော ထုတ်ကုန် 3000 လက်ကား-ကုန်ပစ္စည်းများ-Shanghai HUIZI ဒစ်ဂျစ်တယ်
1) 2pcs အတွက်နမူနာများ၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်မီးအိမ်ဖြင့်ဝယ်သူကကုန်ပစ္စည်းကိုပေးချေသည်။
ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေး အသစ်ကန့်သတ်စတော့ရှယ်ယာ, catalog နှင့်ဒီဇိုင်းများအများကြီးများအတွက် !!!
OEM ထုတ်ကုန်များသည် ဖောက်သည်တောင်းဆိုချက်အတိုင်း ပြုလုပ်ထားသည်။
FOB နှင့် CIF ပို့ဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် လေဆိပ်ပို့ဆောင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒီဇိုင်းအဖွဲ့သည် သင့်ထုတ်ကုန်များကို အနုပညာလက်ရာမြောက်အောင် ကူညီပေးနိုင်သည် ။
အစုလိုက်အပြုံလိုက် ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား Amazon FBA သို့ တိုက်ရိုက် ပို့ဆောင်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
Original products include nail strips, toe သံမှို strips တွေ, kid nail strips, and other manicure supporting products. We have 6000 square meters cosmetics production purification center, the introduction of German 4-color printing machine, Taiwan automatic screen printing machine, Taiwan automatic grinding and cutting machine, Japanese precision laboratory equipment. The company has passed BSCI social responsibility system certification, ISO9001 quality system certification, products passed SGS certification, FDA certification, and is in line with the United States and the European Union global cosmetics standards.
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များအားနိုင်ငံပေါင်း ၄၀ ကျော်ဖြစ်သောဂျပန်၊ အမေရိကန်၊ အီတလီ၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီ၊ သင်မည်သည့်နေရာမှပင်ရောက်ရှိပါစေကမ္ဘာအနှံ့ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနိုင်စွမ်း။
ကုမ္ပဏီသည် BSCI ၏လူမှုရေးတာ ၀ န်ယူမှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၊ ISO9001 အရည်အသွေးအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၊ ထုတ်ကုန်များ SGS အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၊ FDA အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုရရှိပြီးအမေရိကန်နှင့်ဥရောပသမဂ္ဂ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအလှကုန်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီဖြစ်သည်။
Gel nail wraps အသုံးပြုပုံ?
အဆင့် 1: လက်သည်းခွံကို လက်သည်းခွံနဲ့ ပွတ်ပေးပါ။ အဆင့် 2: လက်သည်းမျက်နှာပြင်ကို သန့်စင်ပါ။ အဆင့် 3: rifht အရွယ်အစားကိုရွေးချယ်ပါ။
အဆင့် 4: မှိုကိုလက်သည်းပေါ်တွင်တင်ပါ။ အဆင့် 5: ပိုနေတဲ့ gel လက်သည်းကို ဖြတ်ပါ။ အဆင့် 6: 60 နှစ်များအတွက်ဂျယ်လက်သည်းဆေးကြောပါ။
အဆင့် 1: ဂျယ်လက်သည်းသုတ်ခြင်းကို ဖယ်ရှားရန် ကပ်ပေးပါ။
အဆင့် 2: လက်သည်းများကို ဂွမ်းစဖြင့် သန့်စင်ပါ။
ဖက်ရှင်လက်သည်းဆိုးဆေးခြုံခြင်း၊ လက်သည်းစတစ်ကာများ၊ လက်သည်းကပ်စတစ်ကာများ
Hot Sale 2d လက်သည်းဆိုးဆေးသည်ဖုံးအုပ်သည့်လက်သည်းစတစ်ကာများကိုဖုံးအုပ်ထားသည်
နောက်ကျောလက်နှင့်နောက်ကျောအတွက်အထူးတောက်ပသောသတ္တုရွှေ sexy nake အမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်အသားအရေလုံခြုံသောယာယီတက်တူးထိုးစတစ်ကာ
တရုတ်စက်ရုံကောင်းမွန်သောလက်သည်းပန်းတောက်ပလက်သည်းခြေသည်းဈေးနှုန်း 3d nail art
လက်လီအရောင်းအဝယ် ၂၀၂၀ ပုံသဏ္newာန်သစ်လက်သည်းနီကယ်သည်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်နှင့်စတစ်ကာများ
2021 usa မဲဒီဇိုင်းလက်သည်းဆိုးဆေးသည်လက်သည်းကပ်ခွာများကိုလက်သည်းခွံများဖုံးအုပ်ထားသည်